Manao Fitsapankevi-bahoaka Voalotonà Tsy Fanarahan-dalàna Maro i Azerbaijan. Misy Mba Miraharaha Ihany Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 17:33 GMT
Tsy maintsy mandeha an-dakilasy ireo ankizy lehibe taorian'ny fahaleovantenan'i Azerbaijan, ao amin'ilay firenena manankarena solika ahitàna lalàmpanorenana misy fiovàna hatrany, fa matetika toa maka endrika tsianjery ireo lesona ao anaty fiaketana, miaraka amin'ny famakiana mitsikera sy adihevitra mampivalaketraka.
Ohatra iray amin'ny vatom-pifidianana ito alefa amin'ny rohy ito. Ny lahatsoratry ny fanovàna natolotra monja no zara rahahitan'ireo mpifidy tao amin'io singan-taratasy io ny 26 Septambra. Tsy misy filazana ny lohatenin'ny lalàna hasiam-panovàna mihitsy, na ilay lalàna tsotra izao.
Ireto vehivavy roa ireto ohatra, azo sary amin'ny lahatsarin'ny RFE, tratra nifidy in-droa tamin'ny biraom-pifidianana samihafa.
Miaraka amin'izany, feno tatitra mahaliana mikasika ny fitaterana mpifidy ary ireo fanavaozana teo ambany tenifototra #AzReferendum ny media sosialy
Ireo fanovàna ireo dia toa hita ho manome tombony ny zanakalahin'i Ilham, Heydar, 19 taona, izay nomena ny anaran'ny raibeny ary voalaza ho manana tranobe sivy eny amoron-drano any Dubai tao anatin'ny fijoroana vavolombelona momba ny fananan'ny fianakaviana eo amin'ny fitondràna.